Swedishka oo aragti fiican ka qaba qaxootiga | Somaliska
Swedishka oo aragti fiican ka qaba qaxootiga
Aragtida dadka Swedishka ah ay ka qabaan qaxootiga ayaa soo hagaagaysa sida lagu soo bandhigay cilmi baaris. Tiradada Swedishka ka soo horjeeda in ay Sweden qaadato qaxooti ayaa hoos u dhacday sanadihii la soo dhaafay iyadoo qaar badan ay hada aaminsanyihiin in ay haboontahay in qaxooti badan la caawiyo.
Cilmi baarista uu sameeyay machadka SOM ayaa lagu soo bandhigay in tirada dadka aan jecleyn in ay Sweden qaadato qaxootiga ay hada tahay 41% halka tiradaas ay ka ahayd 65% sanadkii 1993. Markii baaritaan lagu sameeyay cida ay yihiin dadka ka soo horjeeda qaxootiga ayaa cilmi baaristu muujisay in ay yihiin dadka waxbarashadooda hooseysa, oo fikrad qaldan ka haysta magan galyo doonka, isla markaana u codeeya xisbiga SD.
Aragtida ay Swedishku ka qabaan soo galootiga ee soo hagaageysa ayaa lagu micneeyay in ay ka dambayso dadkii oo waxbartay iyo caalamkii oo isku furmay. Sidoo kale waxaa jiray olole balaaran oo mudo socday kaasoo siyaasiyiinta Sweden ay u galeen in la wanaajiyo qaadashada iyo qaabilaada soo galootiga.
Cilmi baarista ayaa dhinaca kale muujisay in dadka Swedishka ah ee taageersan in soo galootigu ay diintooda si fiican ugu dhaqmaan marka ay Sweden yimaadaan ay kor u kacday. Sanadkii 2009 ayaa tirada dadka taageersan fikradaas ahayd 19% halka sanadkii la soo dhaafay ay kor ugu kacday 27%.
Inkastoo cilmi baaristaan ay niyada noo dhisayso ayaa hadana la is weydiin karaa sida ay warbixintaan uga turjumayso xaqiiqada. Maadaama sanadihii dambe ay siyaaday taageerada xisbiga SD, weeraro lagu qaaday soo galootiga, isla markaana ay si cad u muuqato olole lagaga soo horjeedo soo galootiga.
Websiteyo badan oo la jabsaday
Wasiirka Isdhexgalka oo la kulmaya Muslimiinta
abdir rahman sh. dahir osman says:
June 27, 2012 at 11:13
asc waa muhiib in ey wax fahmaan waana mid loo bahan yahay in ey wax ka faa ii deystaan soo golootiga
war badanaa maxaa yeelay marka hore luqada barta oo ha is dhihin yurub ayaad timaadeen ee wax lee iska sheegta marka ilaah caafimaad ka barya
June 28, 2012 at 09:13
Mudane jimcaale, waad salaamantahay midda xigta runtii pagekii waxaad ka buuxisey sharaxaadii iyo sawiradii fadlan dib ugu laabo page-ka oo ka dhig mid friendly ah, waxaa fiican in dadku si sahlan u daalacan karaan inta aan ka warqabo asxaab badan ayaa arintaan isku raacey fadlan ku laabo ama xigtaa cod uga qaad dadka IT related ah ama wax fahmaya. ma ahi mucaarad laakiin waxaan jeclahay in wax hagaagaan bro
July 4, 2012 at 22:53
asc jimcaale waa sida uu saacid sheegay waa la qabsa la nahay ee fadlan sidii hore ku celi beyjka waa mahadsan tahay